Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Andrii Beshta as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Andrii Beshta as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok.
Mr. Andrii Beshta was born on 14th December 1976 in Rozhyshche, Ukraine. He was graduated from the Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of International Relations in 1998. He joined the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in 1998 and served at various capacities. He was Acting Director-General of the Department of International Organizations of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine from 2011 to 2016. Since January 2016, he has been serving as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to the Kingdom of Thailand.
Mr. Andrii Beshta is married, and has two sons andadaughter.
Dated, 19th August 2016
Mr. Andrii Beshta အား ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ယူကရိန်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။
Mr. Andrii Beshta အား ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ယူကရိန်းနိုင်ငံ၊ Rozhyshche မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် လဗ်ဗီးမြို့ရှိ Ivan Franko အမျိုးသား တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ယူကရိန်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ ယူကရိန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဦးစီးဌာန၌ ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစတင်၍ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ယူကရိန်းသံအမတ်ကြီး အဖြစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။၎င်းသည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားနှစ်ယောက်၊ သမီးတစ်ယောက် ရှိသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်